Ụgbọ okporo ígwè si Munich ruo Prague dara na -egbu ndị njem na Pilsen, Czech Republic
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ụgbọ okporo ígwè si Munich ruo Prague dara na -egbu ndị njem na Pilsen, Czech Republic
Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa na Czechia • News • Rail njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ụgbọ okporo ígwè Pilsen, Czech Republic
Ụgbọ okporo ígwè si Munich gaa Prague nwere ike gbaa ọkụ na -acha ọbara ọbara mgbe ọ gafesịrị ókèala Germany na Czech Republic kpatara ụgbọ oloko mpaghara dị nso na Pilsen.
N'oge na -adịghị anya ka elekere asatọ nke ụtụtụ a, ụgbọ oloko abụọ na -ebukọ gbakọrọ na Czech Republic n'akụkụ Pilsen na obodo Domažlice, obodo dị na mpaghara Plzeň nke Czech Republic.
Otu ụgbọ oloko bụ ụgbọ oloko na -aga ime obodo na -aga Munich, Germany na Prague, Czech Republic.
Ụgbọ okporo ígwè awara awara EX 351 kụrụ ụgbọ okporo ígwè mpaghara OS7406.
"Anyị nwere ike gosi na mmadụ abụọ nwụrụ na ebe ahụ," ndị uwe ojii Czech kwuru na Twitter.
Ndị uwe ojii kwuru na helikọpta na -enyere aka ibuga ndị ihe metụtara n'ụlọ ọgwụ dị nso. Ndị ọrụ mberede tinyere ngalaba mgbanyụ ọkụ mpaghara nọkwa ebe ahụ na -eme ọtụtụ ndị njem merụrụ ahụ
A kọrọ na ihe mberede a mere mgbe elekere asatọ nke ụtụtụ.
Dabere na nkwupụta ekwesighi, ụgbọ oloko Intercity Express leghaara ọkụ na -acha ọbara ọbara anya ma nwee ike kpatara ihe mberede ahụ.
République Tchèque: L'express Munich - Prague EX 351 aurait percuté un train local en provenance de Plzen (OS 7406), na République tchèque pour des raisons que l'enquête éclaircira. pic.twitter.com/Fy5RfReyrQ
Onye minista na -ahụ maka njem na Czech Republic Karel Havlicek nọ ebe ahụ.
Veteran Birder Herbert Byaruhanga Onye isi ala ọhụrụ nke…
Emirates weghachiri nkwa ya na Seychelles na Expo…
Hilton mepere ụlọ oriri na ọṅụṅụ kachasị na Asia Pacific
WHO: Oge maka ikike ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa Europe bụ ugbu a